Home Wararka Somaliland oo ku eedeysay DFS inay ka hor-istaagtay lacago gaaraya $60 Milyan
Somaliland oo ku eedeysay DFS inay ka hor-istaagtay lacago gaaraya $60 Milyan
Madaxweynaha dowlada la magac baxday Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka qaybgalay Munaasabad lagu maamuusayay 61-sano guuradii kasoo wareegtay xornimada Gobollada Waqooyi ee Soomaaliya ayaa eedeyn u jeediyay Dowladda Federaalka.
Madaxweyne Biixi aad u xamaadaysan waxa uu meel ka dhac ku tilmaamay in Muqdisho lagu maamuuso 26-ka June isaga oo eedeyn kala dul dhacay Siyaasiyiinta kasoo jeeda Gobollada Waqooyi ee xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
“Xamar waxa ay leedahay waxa aan u dabbaaldegeynaa Gobollada Waqooyi xorriyadooda, aniga meel ka dhac ka weyn & Gardarro intaa ka weyn ma garanayo, In Xamar tiraahdo anaga ayaa Xukuno Somaliland balse dhanka kale dagaal gudaha ah mid, mid diblumaasi ah, mid xabad ah & mid cunaqabateyn ah saarto” ayuu yiri Muuse Biixi.
Madaxweynaha Somaliland ayaa afartii sano ee Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sheegay in laga xayiray lacag ka badan $60 Milyan (Lixdan Milyan oo Doollar) oo ah kaalmo xooggeeda uga imaaneysay Bangiga Adduunka.
“Dowladda maanta Xamar joogta waxa ay Qaramada Midoobay ku dacweysay Imaaraatka Carabta oo mashaariic ka fulinayay Dekedda Berbera, Heshiiskii London 2012 ee dhigayay in kaalmada sanduuqa naloo furay aan u madax bannaanaano ayay xannibtay oo waxa ay naga joojisay afarta sanadii u dambeysay in ka badan $60 ayaa naga xayiran” waa sida uu hadalka u dhigay Muuse Biixi.